Alle ha u naxariistee fannaanada Kinsi X. Adam oo ku geeriyootay Hargeysa. – Radio Daljir
Alle ha u naxariistee fannaanada Kinsi X. Adam oo ku geeriyootay Hargeysa.
Hargeysa, Jul 23 – Alle ha u naxariistee waxaa habeen hore, 21-ka Juun ku geeriyootay magaalada Hargeysa fannaanada Kinsi X. Adam.
Alle ha u naxariistee fannaana Kinsi waxaa ay ka mid ahayd hoobaladii Waaberi ee Somaliya, waxaa ay lahayd cod dahabi ah oo siiqa sare ay ka heesto oo qofkii mar maqlaa aanu ilaawi karin, waxaana ay ahayd fannaanad leh shacbiyad aad u balaaran oo jiilal kala duwan leh.
Asxaabteedu Kinsi waxaa ay ku sifeeyeen shakhsi dabci wanaagsan oo kaftan badan oo leh rafiiqnimo qoto dheer.
Waxaa ay ku dhalatay gobolka Togdheer dabayaaqadii sannadihii kontomaadkii, waxaana ay ku soo barbaartay, waxbarashada hoose-na ay ku qaadatay magaalada Hargeysa.
Waxaa ay ka mid ahayd dhallintii Ubaxa Kacaanka, kadibna waxaa ay ku biirtay sannadii 1973-dii kooxdii Onkod ee ciidanka Asluuba Somaliyeed; bilawgii sideetamaadkii ayaa ay deetana ku biirtay hoobala Waaberi.
Kinsi fannanad heesta oo keliya ma aanay ahayd ee waxaa ay ahayd jilaa riwaayadeed oo masrixiyadeeda aad loo jecel yahay.
Riwaayada sida aadka ah loogu xusuusto Kinsi, oo ay ka ahayd haldhaaga, ayaa ahayd riwaayadii “Waa Maadays Aduunyadu Dadkuna Way Matalayaan” oo uu curiyey abwaan Maxamed C/llahi Ciise ‘Sangub’ sannadkii 1984-kii.
Masiibadu Aduunyada Iyadaa u Macallim ah & Abuur Waana La Yaab oo uu sameeyey abwaan Xasan X. C/llahi ‘Ganey’ ayaa ka mid ah riwaayadaha kale ee ay caanka ku ahayd.
Heesaha ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah:
– Wejiyaal is xasuusta,
– Dhoof caashaq,
– Caashaqa ma baran weli,
– Xagaaga markaan u ciiray,
– Horta yaa abaal gala,
– Dhabta miyaan ku saaraa,
– Mataankaygii geed qari,
– Hablow guurku waa dan,
– Iga maqan,
– Maxaan xabadey ku nacay, iyo heeso kale oo aad u fara badan.
Fannaaniinta ay heesaha talantaaliga ah inta badan waxa qaadi jireen waxaa ka mid ah Alle ha u naxariistee C/llahi Cumar Xarago; Muuse Ismaaciil Qalinle & Siciid Mire Xaydar ayaa iyana ka mid ahaa fannaaniinta ay heesaha darandooriga ah wada qaadeen.
Alle ha u naxariistee Kinsi X. Adam waxaa ay muddooyinka dambe ku noolayd magaalada Hargeysa marka laga reebo sannado kooban oo ay ku noolayd dalka dibadiisa, gaar ah wadamada Khaliijka.
Alle ha u naxariistee Kinsi X. Adam waxaa ay ifka kaga tagtay hal gabar ah oo hadda ku nool Muqdisho.